राष्ट्रपतिलाई लक्षित गरि ३ राउण्ड गोलि चल्यो, के छ अबस्था ? — Imandarmedia.com
राष्ट्रपतिलाई लक्षित गरि ३ राउण्ड गोलि चल्यो, के छ अबस्था ?
एजेन्सी। राष्ट्रपतिको ज्यान मार्ने उदेश्यले एकाएक ३ राउण्ड गोलि प्रहार भएको छ। रुसी सेनाको बिशेष कमान्डो द्वारा रास्ट्रपतिको तिन चोटी ज्यान मा’र्ने प्रयास भएको छ। यो युक्रेनको खबर हो। पुटिनको आदेशमा भएको यो घटनाले युक्रेन भर सनसनी मचाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति भेलोदिमिर जेलेन्स्कीले दिएको बयानले सबैका आखा रसाएका छन्।युक्रेनका राष्ट्रपति भेलोदिमिर जेलेन्स्कीलाइ गए राति तीन पटक मा’र्ने प्रयास भएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आ’क्र’म’ण गरिरहेका बेला उनलाई तीन पटक मा’र्ने प्रयास भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
रुस र युक्रेनबीच यु’द्ध भइरहेका बेला गत साता उनलाई तीन पटक गोली हानिएको बेलायती पत्रिका द टाइम्स्ले जनाएको छ। तर ह’त्याको प्रयास रुसी एजेन्सीहरुकै कारण विफल भएको थियो।
रुसी ‘फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरोको’का कर्मचारी युक्रेन युद्धको विपक्षमा थिए। उनीहरु पुटिनले युक्रेनमाथि गरेको हमलाको पक्षमा थिएनन्। जसले गर्दा जेलेन्स्की बाँच्न सफल भए ।
जेलेन्स्कीले आफ्नो देशप्रति देखाएको वफादारितालाई लिएर अहिले उनको सबैतिर प्रशंशा गरिएको छ। कहिले उनी आफै युद्ध मैदानमा उत्रिएका तस्वीरहरु सार्वजनिक भएका छन् भने कहिले उनी आफ्नो देशको रक्षार्थ आफ्ना देशका सेनाहरुलाई हौसला बढाइरहेका छन्।
रुसले युक्रेनमाथि आ’क्र”ण शुरु गरेको एक हप्ता भइसकेको छ। यसमा कैयन युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ भने दश लाख बढी युक्रेनका नागरिक युद्धबाट बच्न छिमेकी देशमा शरण लिन पुगेका छन्
रुसले युक्रेनका विभिन्न शहर आफ्नो नियन्त्रणका लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमका अनुसार रुसले जेलेन्स्कीको ह’त्या गर्न विभिन्न समूह परिचालित गरेको थियो।
तेस्तै, रूसले आ’क्र’म’ण गरिरहेको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। रूसी आ’क्र’म’ण सुरू भएपछि अनौपचारिक पहिरनमा भिडिओ सार्वजनिक गर्दै युक्रेनी जनतालाई साहस दिइरहेका जेलेन्स्की अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग भेट्दा पनि त्यस्तै पहिरनमा थिए।
राष्ट्रपति भवनभित्र जेलेन्स्कीको कार्यालयका झ्यालमा बालुवाका बोराहरू राखिएको टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा हतियार बोकेका सुरक्षाकर्मी सँगै उभिएका थिए। जेलन्स्कीले अहिले आफू रातमा तीन घन्टामात्र सुत्ने गरेको बताएका थिए।
झुस्स दाह्री भएका र थाकेजस्ता देखिने जेलेन्स्कीले रूसी आ’क्र’मण’मा युक्रेनीले गरेको प्रतिरोधको प्रशंसा गरे। ‘युक्रेनीहरूको साहसका बलमा म बलियो र निर्णायक भएको छु,’ जेलेन्स्कीले भने।
उनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताए। ‘म पुटिनसँग कुरा गर्न चाहन्न भन्ने होइन,’ उनले भने,‘मैले पुटिनसँग कुरा गर्नुपर्छ, सारा विश्वले पुटिनसँग कुरा गर्नुपर्छ। यो युद्धलाई रोक्न त्योबाहेक अर्को कुनै बाटो छैन।’
युक्रेनको सार्वभौमसत्ता बाहेक अरू केही बुँदामा आफू सम्झौता गर्न तयार रहेको उनले बताए। रूसीहरूले पहिला नै सबै प्रश्नको उत्तर तयार पारेकाले अहिले वार्ता गरेर नयाँ कुरा आउन सम्भव नभएको उनले बताए।
रूसी आ’क्र’म’ण’को प्रतरोध गर्न पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेनलाई अझै सैन्य सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले फ्रान्स र जर्मनीसँग युक्रेनलाई नो फ्लाई जोन घोषणा गर्न पनि आग्रह गरे। हास्य कलाकारबाट राष्ट्रपति बनेर पुटिनसँग लडिरहेका जेलेन्स्की,
जेलेन्स्की युक्रेनका लोकप्रिय हास्य कलाकार थिए। त्यही लोकप्रियताका कारण उनी ७३ प्रतिशत मत पाएर युक्रेनको छैठौं राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए।त्यतिबेला जेलेन्स्कीसँग पराजित भएका युक्रेनका पूर्वराष्ट्रपति पेट्रो पोरोसेन्कोले भनेका थिए।
अनुभवविहीन युक्रेनको एउटा नयाँ राष्ट्रपति छिट्टै रूसी प्रभावको कक्षभित्र पर्नेछन्।तीन वर्षपछि पोरोसेन्को भनाइ गलत सावित भएको छ। जेलेन्स्की रूसी प्रभावको कक्षमा परेका छैनन् बरू रूसले युक्रेनलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सेना पठाएको छ।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले किएभमा जेलेन्स्कीको सरकार ढालेर आफूले भनेको मान्ने मान्छेको सरकार बनाउन चाहेका छन्। पहिलो पटक कार्यकारी पद सम्हालेका जेलेन्स्कीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको कुनै एउटा मुलुकले अर्को मुलुकमा गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो सैन्य आक्रमण झेलिरहेका छन्।
सानो मुलुक युक्रेन अहिले संसारको शक्तिशालीमध्येको एक रूसको सैनिकसँग लडिरहेको छ। दुई लाख बढी रूसी सैनिकले जल, जमिन र हवाई मार्गबाट गरिरहेको आक्रमण जेलेन्स्की एक्लै लड्नु पर्नेछ। विश्वका शक्ति राष्ट्रका नेताहरूले उनलाई ’हामी छौं’ भनेर ढाडस त दिएका छन।
तर युक्रेनमा रूसी सैनिकविरूद्ध लड्न न अमेरिकाले सेना पठाउने छ न त उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन नेटोका सैनिक आइपुग्ने छन्।जेलेन्स्कीलाई राम्ररी थाहा छ, रूसी आक्रमणको पहिलो निशाना उनी नै हुन्। उनले शुक्रबार भनेका छन्।
नीहरूले पहिलो निशाना मलाई बनाएका छन्। त्यसपछि उनीहरूले मेरो परिवारलाई मार्नेछन्। राष्ट्र प्रमुखलाई मारेर उनीहरू युक्रेनलाई राजनीतिक रूपमा ध्वस्त पार्न चाहन्छन्।आफू युक्रेन नछोडेर नभाग्ने जेलेन्स्कीले बताएका छन्। ‘म राजधानीमै बस्नेछु र मेरो परिवार पनि युक्रेनमै रहनेछ,’ उनले भनेका छन्। जेलेन्स्कीको राष्ट्रपति यात्रा
उनले आम मानिसका दैनिक जीवनका विषयहरूलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएका थिए।जितपछि उनले भनेका थिए– युक्रेनी नागरिकको हैसियतमा पोस्ट सोभियत युनियनका देशहरूलाई म भन्न सक्छु– हामीलाई हेर, जे कुरा पनि सम्भव छ।
युक्रेनमा समर्थकलाई निराश नपारे पनि जेलेन्स्कीले भूराजनीतिको खेलमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सकेनन्। रूसले युक्रेनमाथि बिहीबार सैनिक हमला नै ग¥यो। एउटा सानो छिमेकीमाथि रूस र राष्ट्रपति पुटिनले गरेको यो आक्रमणको समीक्षा इतिहासले गर्ला तर अहिले भने जेलेन्स्की युक्रेनका सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रपति देखिएका छन्।
पुटिन युक्रेनबाट के चाहन्छन्? रूस र युक्रेनको अहिलेको तनावसँग यी दुई मुलुकको इतिहासमात्रै होइन रूस र पश्चिमा राष्ट्रबीचको भूराजनीति पनि जोडिएको छ। गत १४ जनवरीमा केही रूसी ह्याकरहरूले युक्रेन सरकारका वेबसाइटहरू ह्याक गरे।
लाखौं मानिसले खोल्ने वेबसाइटमा उनीहरूले ‘डराऊ र अझै नराम्रो अवस्थाका लागि तयार भएर बस’ भनेर लेखिदिए। ह्याकरले वेबसाइट नियन्त्रणमा लिएका बेला युक्रेनको तीनतिरबाट झन्डै एक लाख रूसी सेनाले युक्रेनलाई घेरिसकेका थिए। अहिले झन्डै दुई लाख रूसी सैनिकहरू युद्धमा चाहिने फिल्ड अस्पताललगायत संरचना बनाएर तम्तयार भएर बसेका छन्।
यही बीचमा युक्रेनको उत्तरमा पर्ने बेलारूसमा रूसका ‘बटालियन ट्याक्टिकल ग्रुप’का सैनिकहरू आएर संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका छन्। रूससँग सीमा जोडिएको बेलारूस उसको ‘दोस्त’ हो। रूसमा जसरी भ्लादमिर पुटिनले शासन गरेका छन्, त्यसैगरी बेलारूसमा एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले तानाशाही शासन चलाइरहेका छन्। २७ वर्षदेखि बेलारूसको शासनमा रहेका लुकासेन्कोले गत वर्ष साउनमा आफूविरूद्ध प्रदर्शन हुँदा पुटिनलाई फोन गरेर सहयोग मागेका थिए।
डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिँदा पुटिनले युक्रेन रूसी इतिहासको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताएका थिए। किएभको सत्ता आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भनेचाहिँ रूसीहरूलाई सह्य हुँदैन। सन् २०१४ मा त्यस्तै भएको थियो।
सन् २०१३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्टोर यानुकोभिचले युरोपियन युनियनसँग पोलिटिकल एसोसिएसन एन्ड फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीविरूद्ध प्रदर्शन भएका थिए। पछि उनलाई सत्ताबाट हटाइयो। उनले रूससँग सहयोग मागे।
देशका विभिन्न ठाउँमा उनको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनहरू भए। तीमध्ये क्रिमियामा भएका प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले रूसी झन्डा बोकेर पुटिन हाम्रो राष्ट्रपति हो भन्दै नारा लगाए। केहीदिनपछि रूसले क्रिमिया अतिक्रमण ग¥यो। पछिल्लो दशकमा कुनै देशले सैनिक शक्तिका भरमा अर्को मुलुकको भूमि आफ्नोमा गाभेको यो पहिलो उदाहरण हो।
युक्रेनले इयूको मात्र होइन उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन नेटोको सदस्यता लिने तयारी गरिरहेको चर्चा पनि भइरहेको छ। युक्रेन पनि नेटोको सदस्य राष्ट्र बने अमेरिकी नेतृत्वको उक्त सैन्य गठबन्धनका सैनिकहरू रूसको नाकैमा आइपुग्छन्। रूस र युक्रेनबीच १२ सय माइल सीमा जोडिएको छ। पुटिन कुनै पनि मूल्यमा युक्रेनलाई इयू र नेटोको सदस्य नहोस् भन्ने चाहन्छन्। एजेन्सीको सहयोगमा।